Tayada, Soosaarayaasha Qalabka Mashruuca, Lagu Sameeyay Shiinaha - Dongguan Yingjia Farsamada Teknolojiyada Co., Ltd
Hoyga >Alaabta >Mashruuc
Nooca aasaasiga ah ee la qaadan karo oo ah borojektar LED
Waxaad ku daawan kartaa Hollywood mashruucyada LED-yada waaweyn. Mini projector filim la qaadan karo wuxuu taageeraa tiyaatarka guriga 1080P, borojekro fiidiyoow leh 55,000 saacadood nolosha guluubka LED, oo la jaan qaada HDMI, RCA, USB, kaarka xusuusta TF, usha TV, PS4, iPhone. Noloshaada ka dhig mid aad u xiiso badan. Ku saabsan mashruucan
Faa'iidada barta iibinta alaabta U oggolow inaad haysato mini WIFI-ga la qaadan karo oo ah borojeeraha LED-ka 1080P HD mashiinka tiyaatarka fiidiyowga fiidiyoowga ah ee 2300 lumens, ku raaxeyso madadaalo aan dhammaad lahayn ee tiyaatarka guriga.
Mashruuca micro micro, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee 5500 lumens projector-ka banaanka banaanka sanadkaan, wuxuu taageeraa shaashadda iskudhafka muraayadaha casriga ah ee 1080P iyada oo loo marayo WiFi / USB cable, si loo ogaado madadaaladaada guriga ee quruxda badan ee ku saabsan mashruucan LED-ka
Android WiFi version mashruuc
Faa'iidada dhibic iibinta alaabada Qalabka LED HD ee xirfadle Android ah oo si aan toos ahayn ula wadaagi kara shaashadda taleefanka gacanta. Waxay taageertaa TV-ga HDMI / AV / USB / SD / VGA oo leh shaashad shaashadda taleefanka casriga ah, BT 4.0 1080P iyo 4000 Lux oo ah mashiinka WiFi la qaadan karo.
Qalabka wanaagsan ee istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah ee kaa dhigi doona inaad ku mashquuliso, wifi projector, mini slider projector, 3D 1080p karamin mini projector, oo leh batteri, ayaa loo isticmaali karaa meel kasta, waxaa loo isticmaali karaa xafiiska masraxa tiyaatarka mobilada, HDMI Bluetooth wireless wireless, aad ku habboon in la isticmaalo, hawlgal si fudud loo fahmo.